Fitantanam-pitondrana · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Aogositra, 2012
Afrika: Hialàna Amin'ny Ozon'ny Harena An-kibon'ny Tany
Afrika Mainty 24 Aogositra 2012
Maninona ireo firenena Afrikana feno harena an-kibon'ny tany tahaka ny Repoblika Demokratikan'i Kongô, Nizeria na Madagasikara raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy, no tratran'ny fahantrana tsy fahita any ankoatra ihany koa? Izany no hevitr'ilay ozon'ny harena an-kibon'ny tany, izay nanimba firenena maro tany Afrika ambanin'i Sahara.
Iran, Israely: ‘Tsy Vonona Ny Ho Faty Amin'izay Adinareo’
Avy amin'ny lohateny lehiben'ireo fampahalalam-baovao mahazatra dia tahaka ny eo an-tokonan'ny ady i Iran sy Israely. Mitohy mandrahona hanafika ireo foto-drafitrasa nokleary iraniana ireo mpanao politika Israeliana, ary ireo manampahefana Iraniana kosa mitanisa ireo teny fanentanany hatrizay milaza ny "hanjavonan'i Israely eo amin'ny sarintany". Nefa arakaraky ny fitomboan'ireo sahoan-dresaka hisian'ny ady eo amin'ny roa tonta, no itomboan'ny hafanam-po mikatsaka fandriam-pahalemana ihany koa
Azia Atsinanana 16 Aogositra 2012
Bangladesh: Manantena Hahita Finday Amin'ny Fiteny Bangla
Azia Atsimo 15 Aogositra 2012
Miisa 93,8 tapitrisa ireo mpampiasa finday ka mampiasa ny findainy ankamaroan'ireo mpamandrika mba hiantsoana ny hafa.Vitsy dia vitsy ny mampiasa ny someso [SMS]. Araka ny lazain'ny Vaomieram-pandaminana ny fifandraisan-davitra ao Bangladesh (BTRC) dia manodidina ny somes0 30 tapitrisa eo no niampita isam-bolana nandritra ny taona 2011. Izany no midika fa manodidina ny finday 1 amin'ny...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Aogositra 2012
Nankalaza ny fahafahan’ ny firenena tamin'ny fitondran'i Muammar Gaddafi nandritra ny 42 taona ny Lybiana androany alina. Nibahana tamin'ny resaky ny mpiserasera ny fankalazana ary nizara ny fihetseham-pony avy izy ireo tamin'izany. Nifanindran-dàlana tamin'ny faha-20 andron'ny Ramadana, volan'ny fifadiankanin'ny Miozolomana ny androany alina, andron'ny fahafahana tao an-drenivohitra Libyana, Tripoli sy andro nandrodanana ny fangejan'i Gaddafi,...